Services - Hair Design Takuya
Hair Design Takuya မှ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်စီိတိုင်းနှင့်လိုက်ဖက်ညီသောဆံပင်ဒီဇိုင်းများကိုဖန်တီးပေးနေပါပြီ။ဦးခေါင်းခွံအနေအထား ဆံပင်ဆံသားအထူအပါးနှင့် မျက်နှာပုံသဏ္ဏာန်နှင့်လိုက်ဖက်ညီမှုရှိသော ဒီဇိုင်းများကိုအတူတကွဖန်တီးကြရအောင်
Hair Design Takuya ရဲ့Body massage menu ကတော့ တစ်ကိုယ်လုံးရဲ့ Lymph များကို ကောင်းစွာ နှိပ်နယ်ခြင်းဖြင့် Lymph မှာရှိတဲ့ အညစ်အကြေးနဲ့ သွေးကြောပိတ်ဆို့မှုများကို ကောင်းစွာ စီးဆင်းစွန့်ထုတ်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေပါသည်။ခန္ဓာကိုယ်ညောင်းညာမှုများကို ပြေလျော့သက်သာစေမယ့်အပြင် စိတ်ပင်ပန်းမှုများ လျော့နည်းပြီး Relax ဖြစ်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှ ဆရာဝန်များနှင့် Esthe salon များ ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ထားသော ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုထားပါသည်။အသက် ၁၀နှစ်အရွယ်မှ စပြီး အမွှေးအမျှင်များကို ထိရောက်စွာ ဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်။တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး အမွှေးပေါက်နှုန်း circle မတူညီပေမယ့် ၁၀ရက် ၁ကြိမ်လောက်လုပ်ရုံဖြင့် သိသိသာသာ အမွှေးအမျှင်များကို နည်းပါးစေပါသည်။
Neck & shoulder ကို နှိပ်နယ်ပေးခြင်းဖြင့်	မျက်နှာတစ်ဝှိုက်ရှိ အကြောအချဉ်ပြေပြစ်ပြီး သွေးလည်ပတ်မှုကို ကောင်းစေပါသည်။Dead cell နှင့် အိုမင်းရင့်ရော်သော cell များကို ဖယ်ရှားခြင်း၊ cell အသစ်များ ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းဖြင့် အမဲစက်များ တင်းတိပ် မဲ့ခြောက် အရေးအကြောင်းများ နေလောင်ဒဏ်နှင့် ၀က်ခြံများကို သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်သောကြာင့် အရွယ်တင် နုပျိုစေပါသည်။Face treatment များကိုလည်း japan နိုင်ငံမှ professional ပစ္စည်းများကိုသာ အသုံးပြုထားပါသည်။
နိုင်ငံတကာမှာ ခေတ်စားလျက်ရှိသော ဆံပင်ဒီဇိုင်းများကို အထူးဖန်တီးပေးလျက်ရှိနေသော ဂျပန်နိုင်ငံ အိုမိုတဲ့ဆန်းဒိုမြို့ရဲ့ နံပါတ်တစ်ဆရာမှ ဆံပင်ပညာများကို ပြန်လည်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအရပ်ရပ် ဘယ်နိုင်ငံမှာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ချက်ချင်းပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော ဆံပင်နည်းပညာများကို အလွယ်ကူဆုံးနှင့် အမြန်ဆုံး တတ်မြောက်ကျွမ်းကျင်အောင် သင်ကြားပေးနေပါသည်။
ဂျပန်ပစ္စည်းများထဲမှ အထူးသီးသန့် Beauty salon သုံး ပစ္စည်းများကို တင်သွင်းပေးပါသည်။ ဈေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ တခြားပစ္စည်းတွေနဲ့ မတူညီတာကတော့ အသုံးပြုတဲ့အခါ ခံစားရတဲ့ ခံစားချက် ၊ အကျိုးသက်ရောက်မှု နှင့် ပါဝင်ပစ္စည်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ပညာရှင်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပေးမှုကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
Hair Salon from Tokyo Omotesando
I will propose the treatment that is most suitable for your hair.
Tuesday :10:00 – 20:00
Wednesday : 10: 00 – 20:00
Closed : 20:00 PM
Regular holiday every Monday.
Every Saturday and Sunday, Takuya is absent until 17:00 onabusiness trip to Fujiko Beauty Center.
No.14 / A-1, Ma Kyi Kyi Street, Sanchaung Township, Yangon.
Telephone : 09 776040777